Ciidamada Jubbaland oo saddex qof ku dilay Magaalada Kismaayo – AfmoNews
Ciidamada Jubbaland oo saddex qof ku dilay Magaalada Kismaayo
Allaha u naxariistee Maxamuud Maxamed Xaashi ayaa ka mid ahaa ilaalada Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag), isagoona ka tirsanaa Booliska Jubbaland. Marxuumka ayaa shaqada ka tagay, ka dib dilkii 26-kii bishii hore ee October magaaladaasi loogu gaystay Madaxii Amal Bank ee Magaalada Kismaayo. Cabdullaai Cabdisalaan (Shigshigow). Dilka marxuum Shigshigow waxaa si dhow loola xiriiriyay Ciidamada Jubbaland.
Laba dumar ah ayaa ku dhimatay rasaastaasi, halka hal kalana ay ku dhaawacantay. Mid ka mida haweenka la dilay waxaa lagu magacaabi jiray Fardowsa Aadan Guure, waxayna ahayd xaamilo. Sidoo kale gabadha kale ay dileen Ciidamada Jubbaland ayaa maalmo ka hor uun ku umushay magaaladaasi.